Accueil > Gazetin'ny nosy > France : Manakorontana an’i Madagasikara
France : Manakorontana an’i Madagasikara
Ny fanambarana izay nataon’ny fanjakana frantsay tato ho ato dia fihetsika mifono fanakorontanana hoan’ny fanjakana Malagasy amin’izao fotoana izao. Iarahana mahita sy maheno ny fanambarana izay nataon’ny masovohon’ny fanjakana frantsay eto Madagasikara ny alarobia faha 16 jona 2021 lasa teo mahakasika ny fanaovana ny vaksiny « Covishield » eto Madagasikara. Nanambara ity masovoho frantsay ity amin’ny fanambarana nataony fa tsy eken’ny fanjakana frantsay ity vaksiny ity. Ny olona vita vaksiny amin’ity “covishield” dia tsy eken’ny vondrona erôpeanina ary tsy ankasitrahan’ny fanjakana frantsay tanteraka. Gaga sy talanjona ny Malagasy manontolo noho izany satria ny ambasadaoro ny vondrona Erôpeanina eto Madagasikara andriamatoa Giovanni Di Girolamo dia nanao io vaksiny io.
Raha toa ka nisy ny tsy fankasitrahan’ny frantsay an’io vaksiny io dia tany amboalohany dia efa tokony hanao filazana izy ireo. Ny frantsay izay ao anatin’ny vondrona erôpeanina. Izany no ilazana fa fanakorontanana tanteraka no ataon’ny frantsay izao.
Tsy ny resaka vaksiny “covishield” ity ihany nefa no ahitana endrika fanakorontanana ataon’ny frantsay eto Madagasikara fa toa izany koa ilay mahakasika ny “Iles Eparses”. Fanambarana tiana hampitaina amin’ny vahoaka sy ny fanjakana Malagasy ny filazana fa hataon’ny fanjakana frantsay valan-javaboahary natoraly an’i Frantsay ny nosy Glorieuse. Tena fanaovana tsinotsinona ny fanjakana sy ny vahoaka Malagasy tanteraka ny raharaha ary azo adika ho fihantsiana ady ihany koa. Raha vao nahare izany ny vahoaka Malagasy dia maro ny olona no tsy faly, korontana tanteraka no nitranga.
Tsy ireo ihany no azo lazaina fa fanakorontanana politika ataon’ny frantsay eto Madagasikara fa ny mahakasika ny fihaonana frantsa-afrika, iray volana lasa izay tany frantsa farany teo. Niteraka resabe teto amin’ny fienena koa iny raharaha iny. Madagasikara izay tsy nasian’ny frantsay hasina mihitsy tamin’ireny fotoana ireny satria dia tsy nasainy ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara.
Ireo tranga ireo no ilazana fa mifono fanakorontanana ny fihetsikin’ny frantsay eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ny resaka mandeha eny anivon’ny tontolo politika isan-karazany dia milaza fa tsy mankasitraka izao fanjakana misy ankehitriny izao ry zareo frantsay. Na marina na tsy marina izany dia hafahafa ihany ny raharaha ankehitriny. Soa ihany fa Hendry ny vahoaka Malagasy ka tsy azo ampiadiana intsony.